Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်)
Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Pivalone Neomycin ကို အများအားဖြင့် ဓါတ်မတည့်မှုများကြောင့် နှာခေါင်းအတွင်းလွှာရောင်ခြင်း၊ရာသီအပြောင်းအလဲတွင် နှာစေးခြင်း၊ နှာစေးသောကြောင့် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း(ရေတိုနှင့် နာတာရှည်ဖြစ်ခြင်း)၊သွေးကြောများမူမမှန်ခြင်းကြောင့် နှာခေါင်းအတွင်းလွှာရောင်ခြင်းတို့ကို ကုသရန် အသုံးပြုကြပါသည်။
Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Pivalone Neomycin ကိုအစာမရှိခင်ချိန်တွင် သောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Pivalone Neomycin (သောက်ဆေး)ကို ၃၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ်အောက် မှာသိမ်းပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Pivalone Neomycin ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Pivalone Neomycin ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Pivalone Neomycin ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Pivalone Neomycin ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းကို သေချာစွာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီးမှ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ကိုယ်ထဲတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ပြန့်နှံ့ခြင်း လက္ခဏာများရှိလျှင်လည်း ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် တွဲပြီး အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
စတီးရွိုက်ဆေးများကို ထိုးခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်အပေါ်လွှာတွင် အဆီဓါတ်လွန်ကဲခြင်း၊ မျက်စိအမြင်လွှာတွင် ပြသနာဖြစ်ခြင်း၊ အဒရီနယ်ဂလင်း အတွင်းပိုင်းတွင် အကြိတ်ဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ပြင် စတီရွိုက်ရှုဆေးများ၊ လိမ်းဆေးများကို ရေရှည် အသုံးပြုလျှင်လည်း ထိုဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။
ယခုဆေးသည် ကားမောင်းခြင်း၊ အလုပ်ခွင်ဝင်ခြင်းများအတွက် အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေနိုင်ပါ။
သို့သော် ထိုဆေးဖြင့် ကုနေချိန်တွင် ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောဂါများဖြစ်ခြင်း၊ မှိုရောဂါများဖြစ်ခြင်း နှင့် ရောဂါပိုးများထပ်ဝင်လာခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးလိမ်းကာစတွင် လိမ်းသောနေရာတွင် ထုံကျဉ်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် ချွဲလွှာများခြောက်ခြင်း၊ မျက်နှာ ဖောရောင်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပြီး ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် ဖောရောင်ခြင်းများ မဖြစ်တတ်ပါ။
(ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
ဘယ်ဆေးတွေက Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Pivalone Neomycin ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Pivalone Neomycin က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Pivalone Neomycin ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Pivalone Neomycin ဆေးပြား ၁ပြား ၂ပြားကို ကျေအောင်ထောင်းပြီး နှာခေါင်းတစ်ပေါက်စီ အတွင်းသို့ တနေ့လျှင် ၂ ကြိမ်မှ ၄ကြိမ် အထိထည့်ပေးပါ။ သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏထက် မပိုရပါ။
ကလေးတွေအတွက် Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Pivalone Neomycin (ပိုင်ဗေလုံး နီယိုမိုင်စင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Pivalone Neomycin ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
100-mg ပြင်းအားရှိသော နှာခေါင်းထဲအစက်ချဆေးရည် 10 mL
(1ml တွင် tixocortol pivalate 1g နှင့် N-cetylpyridinium chloride 0.02 g ပါဝင်သည်။
Pivalone Neomycin ကို လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။